पुरुष देहमा त्यस्तो के छ !- विविधा - कान्तिपुर समाचार
मार्क्सवाद पढ्दै जाँदा सिकिने, बुझिने र देखिने कुरो हो— सत्ताले बलात्कार गर्छÙ यौन हिंसा गर्छ । जेजति दमन, उत्पीडन, कब्जा र स्वामित्वहरू छन्, ती सबै लालपुर्जाधारी सत्ताका कारण छन् । यद्यपि सोभियत सत्ताभित्र महिला हिंसा न्यून भएको हो, निर्मूल होइन । यी सब हुनुको कारण केलाउँदै जाँदा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ— पुरुष देहभित्र त्यस्तो के जिन छ, जसले यौन हिंसा गर्छ ? आफू स्त्री देह भएकाले म पुरुष देहको अनुभूति व्यक्त गर्न सक्दिनँ । कृपया, पुरुष देहधारीहरूले आफ्ना अनुभूति साझा गर्नुहोला ! प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०८:१२